दाँत पहेंलो भयो ? यो उपाय अपनाउनुहोस् … चम्किछ दाँत ! – Dailny NpNews
गगन थापालाई निर्वाचन क्षेत्रमा धक्का : काठमाडौँ -४ मा पर्ने सबैजसो वडामा पराजित
बालेनलाई कांग्रेस बनाउने प्रयास, संवादमा गगन थापा
काठमाडौंमा बालेन करिब २१ हजार बढी मतका साथ अग्र स्थानमा
गगन थापाको क्षेत्रमा मेयर र उपमेयर दुवैमा एमाले विजयी
बालेन शाहको मत सूचनादाताले १० हजार घटाइदिएपछि…
हेटौंडाको मतपत्र : चोर नेताहरुलाई नो भोट
दाँत पहेंलो भयो ? यो उपाय अपनाउनुहोस् … चम्किछ दाँत !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: १३:२१:५६
काठमाडौं । मानिसको व्यक्तित्वलाई मुस्कान तथा हाँसोले आकर्षक बनाउँछ । मुस्कान तथा खुलेको हाँसोले सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह गर्छ । मुस्कान तथा खुलेको हाँसो तब राम्रो हुन्छ, जब दाँत सुन्दर देखिन्छन् । दाँत नमिलेको हुनु, पहेंलो हुनु आदि कारणले मानिसहरु खुलेर हाँस्न सकिरहेका हुँदैनन्।
दाँतको पहेंलोपना हटाउनको लागि विभिन्न विधिहरु बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । तर ती विधिहरु खर्चालु हुन्छन् भने दाँतलाई नकारात्मक असर गर्ने पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा घरेलु विधिलाई अपनाउन सकिन्छ । घरेलु विधिमा आफ्नो घरमा सहजै पाइने सामानहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने कम खर्च पनि हुन्छ।
घरेलु विधिले दाँतलाई नकारात्मक असर गर्दैन । यस विधिलाई आफूले चाहेको समयमा कसैको सहयोग बिना नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। दाँतको सफाई तथा मजबुतीको लागि बजारमा थुप्रै दन्त मन्जन उपलब्ध छन् ।
ती मध्ये आयुर्वेदिक दन्त मन्जनलाई पहेंलो दाँतलाई सेतो बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त दन्त मन्जनमा बेकिंग पाउडर र कागतीको रस राखेर मिलाउनुपर्छ । एक पटक प्रयोग गर्नको लागि थोरै, चनाको एउटा दाना जति नै मन्जन निकाल्नुपर्छ र त्यसमा त्यति नै बेकिंग पाउडर र थोरै कागतीको रस मिलाउनुपर्छ ।
यो घरेलु विधिले बनाएको पेस्टलाई बुरुसमा लगाएर दाँत माझ्नुपर्छ र अरु बेला दाँत माझे जसतै नै गरि कुल्ला गर्नुपर्छ । एक पटकको प्रयोगले नै सान्त सेतो र चम्किलो देखिन्छ । यो पेस्टलाई हरेक दिन प्रयोग गर्दा दाँतमा झंझनाहट हुनसक्छ । त्यसैले यो घरेलु विधि हप्तामा बढीमा दुई पटक मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
४३८ पटक हेरिएको
सेक्सको मामिलामा भ्रमित हुन्छन् भ्यागुता, जुत्तालाई पनि छोड्दैनन् !
कस्तो अ’चम्म!छोराछोरी नभएका वृद्व आमाबुबालाई कुकुरले नाचेरै पाल्दै,छोराछोरी भन्दा बढी माया कुकुरले गर्दैछ(भिडियो हेर्नुस)
युरोपकै पहिलो : स्पेनले प्रस्ताव गर्‍यो महिनावारी हुँदा तलबी बिदा दिने कानुन